Orogoay: Mampiely ny Karnavaly manerantany ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 11:26 GMT
Manamarika ny fisokafan'ny Karnavaly 2010 ao Orogoay amin'ny filaharambe fanokanana nentim-paharazany ny 28 Janoary. Dokadokafana ho karnavaly maharitra indrindra manerantany—manomboka faran'ny volana Janoary ary mifarana ny voalohandohan'ny volana Martsa—ahitana fetibe isan-taona maharitra 40 andro ny hetsika. Tamin'ity taona (2010) ity, namela ny olona manerantany mba hamaky, handre sy hahita momba ny Karnavaly Orogoaiana ny aterineto sy ny media sosialy.
Mpively ampongatapaka milalao candombe nandritra ny parady Las Llamadas (Ny Antso). Sary nalain'ilay mpisera Flickr, ERBR, ary ampisaina ambanin'ny lisansa Creative Commons.
Ahitana parady mitovy amin'ireo izay hita amin'ny karnavaly manerantany ny karnavaly ao Orogoay, ahitana mpanjakavavy, mpively amponga, akanjo marevaka manerana ny arabe, mandihy amin'ny gadom-pirenena. Iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny Karnavaly Orogoaiana ny fifaninanana, izay mifaninana amin'ny sokajy safidian'izy ireo ny mpandray anjara ary maneho ny hatsaran'ny kanto sy ny mozika miavaka ao Orogoay: murga, negros y lubolos (mpilalao candombe), parodistas [es], humoristas [es], ary revista [es]. $
Mety ho fotoana mampanembona ny lasa ho an'ireo Orogoaiana monina any ivelany ny Karnavaly, saingy noho ny bilaogy sy ny pejy Twitter Todo el Carnaval, afaka mitroka raki-peo sy lahatsary tamin'ny fampisehoana tontolo andro ny Orogoaiana manerantany. Ahitana ny mozika karnavalin'ny taona ihany koa ao amin'ny Todo el Carnaval, manohana ireo kasety sy lahatsary VHS Karnavaly manokana efa tamin'ny taona 1970 ny mpamorona azy, Yuri:
Todo el carnaval dia zavatra tahaka ny toerana nanapahako hevitra hizarana ny fitaovana haino aman-jery rehetra ananako momba ny karnavaly. Ny hevitra tany am-boalohany dia ho fara-tahiry ity fitaovana ity, ary lasa nankao amin'ny bilaogy izany mba hizarana azy amin'izao tontolo izao
Murga ensemble Los Curtidores de Hongos manao fampisehoana tamin'ny karnavaly 2009. Sary nalain'i Raúl Antoine, mpisera Flickr rantoine2008, lisansa Creative Commons.
Safidy iray ihany koa ny fihainoana ny Karnavaly mivantana. Nanangana radio [es] mampiaina mivantana an'ireo mpihaino ny fetibe, ary mampanantena fitantarana mivantana 24 ora momba ny vaovaon'ny karnavaly, Carnaval del Futuro .
Lahatsary avy amin'i Eduardo Gamero:
Mpanao gazety sady bilaogera Enrique Filguerias [es] manazava fa handefa mivantana mandritra ny taona ity radio ity.
Ho faly amin'izany vaovao izany ireo mpientanentana amin'ny karnavaly, nampiroboroboin'ny Carnaval del Futuro: fa hanana radio ahafahana mandefa mivantana ny Fetibe karnavaly, amin'ny fomba mitohy sy tsy misy fahatapahana mandritra ny roa ambin'ny folo volana amin'ny taona […] Manomboka ny volana Aprily ka hatramin'ny Desambra, hanome sehatra iray natokana ho fandefasana ny karnavaly avy ao amin'ny firenena ny onjam-peo, miaraka amin'ny fikambanan'ny Karnavaly ara-paritra any San José, ary efa nifampiraharaha tamin'ny solontenan'ny fifaninanana hafa. Havoakan'ny radio koa ny fandaharana miavaka izay mampifandray ny asa fanaovan-gazety amin'ny mozika, fitantarana mivantana, fandraketana ireo fampisehoana atao any Montevideo sy tatitra avy amin'ny fitsidihan'ireo mpitati-baovao manokana.
Radio antserasera iray hafa mandefa mivantana ny fetibe koa ny Radio Yorugua [es], avy ao Los Yoruguas [es], bilaogy ho an'ny sy momba ny Orogoiaiana monina any ivelany. Ny Los Yoruguas ihany koa dia manome fizarana media marolafy natokana ho an'ny vaovao, lahatsary sy sarin'ny fetibe karnavaly tamin'ity taona ity.
El Pedregullo [es], izay ao anatin'ny Carnaval del Futuro ihany koa, miantso ny tenany ho “vondrom-piarahamonina antserasera ao amin'ny Karnavaly Orogoaiana.” Miasa ho tambajotra sosialy ahafahan'ny mpiserasera miresaka ny zava-mitranga, mandefa sary sy lahatsary, ary mamorona vondrona ity vondrom-piarahamonina antserasera madinika ity :
Natao ity tranonkala ity mba hizarana izay zava-drehetra mifandraika amin'ny karnavalintsika. Ny Pedregullo, toerana izay hisian'ny fifaninanana. Misorata anarana ary zarao ny sarinao, ny lahatsarinao sy ny hevitrao.
Afaka milaza am-pahatokisana ny Orogoaina fa izy ireo no manana karnavaly lava indrindra manerantany; tsy tamin'ity 40 andro ny fetibe ofisialy ity ihany, fa noho ny aterineto sy ny media sosialy manaparitaka ny heriny nandritra ny 325 andro sisa.
5 andro izayEl Salvador